Global Voices teny Malagasy » Iran: Hetsi-panoherana an’i Ahmadinejad any New York · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Septambra 2009 7:29 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Iràna, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Politika
Miandry ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad izay nandeha  nankany New York, hanatrika ny fivoriam-ben'ny Firenena Mikambana ny hetsi-panoherana ny governemanta Iraniana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona  mitranga any Iran. Manentana ny olona handray anjara amin'ity fihetsiketseham-panoherana ity ny fampitam-baovaon'olo-tsotra.
 Mandra-piandry aloha dia nofoanan'ny  New York Helmsley Hotel ny lanonana saiky notontosaina tamin'iny herinandro iny rehefa tsikaritra fa voalahatra hanatrika sy handray fitenenana Atoa Ahmadinejad.
Nikahang Kowsar , mpanao sariitatra sady mpamaham-bolongana koa dia nampiseho tamin'ny sariitatra iray nataony an'i Ahmadinejad katry-rami (fa tsy ataoko hoe Quat'mi) ao New York, manontany ny Tsangambaton'ny Fahafahana trano azo onenana. Toy izao ny vakin'ny soratra ao amin'ny sariitatra:
“Sao dia manan-trano tsy misy mipetraka ianao ranabavy, na lava-totozy, azo hofaina mandritra ny herinandro?”
Amin'ity lahatsary manaraka ity kosa no anasana ny olona hanohitra an'i Ahmadinejad amin'ny anaran'ny maritiora. Angon'afisy sy sary ampiasaina any amin'ny fihetsiketsehana Iraniana no asehon'ny lahatsary.
Ao amin'ny United4Iran, serasera tsy manohana olona fa mitolona ho amin'ny fampanajana ny zon'olombelona sy maha-olona ao Iran no hamakiantsika fa :
Aiza ny safidiko ry New York, sy ny fikambanana fototra hafa, dia manasa anao handray anjara amin'ny fihetsiketsehana izay tontosaina eo amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana eto New York mandritra ny 23 sy 24 septambra. Manohitra ny fahatongavan'i Ahmadinejad izy ireo noho ny fanitsakitsahana ny maha-olona sy ny zon'olombelona mihatra amin'ny vahoaka Iraniana, nefa iantohan'ny Fanambaran'ny Firenena Mikambana fampanajana ny zon'olombelona sy ny fifanarahana iraisam-pirenena eo amin'ny fahalalahana (zo) politika, nosoniavin'i Iran.
Kaaveh Aahangar ao amin'ny  Iranian.com no manazava fa tsy fandaniam-potoana tsy akory ny fanoherana an'i Ahmadinejad ao New York :
Tsikaritry ny haino aman-jery hoe aiza no misy hetsika. Tsikaritry ny mpandalo sy ny manodidina ny fotoana isian'ny fanoherana. Ho hitan'ny mpanao politika fa misy hetsi-panoherana. Ary raha mizotra tsara ny hetsika dia hijery amin'ny maso vaovao ny anton'ny fanoherana izy ireo. Tsy hoe mandresy lahatra ho azy amin'izao ireny hetsi-panoherana ireny. Fa manasa ny hisian'ny fanovàna. Manasa fijery vaovao amin'ny lohahevitra sy ny tolona. Mahatonga ny olona, ny mpanao politika sy ny mpanapa-kevitra politika hahafantatra tsara izay tandrovan'ny olona fatratra amin'io foto-kevitra iray io ireny hetsi-panoherana ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/24/3555/
 ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona: http://www.iranhumanrights.org/2009/09/report09
 hamakiantsika fa: http://united4iran.org/
 ao amin'ny: http://www.iranian.com/main/blog/kaaveh-aahangar/why-protesting-against-ahmadinejad-new-york-not-waste-time